मठ मन्दिर वरिपरी मद्यमांश खायो भने जनकपुरधाम चम्किन्छ सोच राख्नु गलतः मुरलीमनोहर मिश्र, युवा अभियानी – doodhmati || dudhmati
Home / बातचित / मठ मन्दिर वरिपरी मद्यमांश खायो भने जनकपुरधाम चम्किन्छ सोच राख्नु गलतः मुरलीमनोहर मिश्र, युवा अभियानी
मठ मन्दिर वरिपरी मद्यमांश खायो भने जनकपुरधाम चम्किन्छ सोच राख्नु गलतः मुरलीमनोहर मिश्र, युवा अभियानी
Sujeet Jha October 4, 2018	बातचित 1,653 Views
प्र. परिक्रमा सडक भित्र मद्यमांश नियन्त्रण गर्ने अभियानमा तपाई लाग्नु भएको छ त्यो अभियान कहाँसम्म पुगेको छ ?
अहिले हाम्रो अभियान जनचेतनामूलक रहेको छ । विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई समस्यासंग अवगत गराई रहेका छौँ । सबै पक्षको निक्कै समर्थन प्राप्त भईरहेको छ । जनकपुरधामलाई धाम बनाउनु हुन्छ भने केही त्याग गर्नै पर्छ । फेरी परिक्रमा सडक भित्र मद्यमांश केही सीमित व्यक्तिले मात्रै बिक्री गर्दै आई रहेका छन् । त्यसकारण समस्या समाधान हुनेमा आफूहरु विश्वस्त छौँ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले चाह्यो भने चाँडै समस्या समाधान हुन सक्छ । त्यसको नियतमा खोँट छ
प्र. एकातिर जनकपुरधामलाई राजधानी बनाउँदै हुनुहुन्छ अर्कोतर्फ कट्टरता तर्फ अग्रसर हुँदै हुनु हुन्छ यसले के संकेत दिन्छ ?
मठ मन्दिरमा माछा माशु खायो भने राजधानी चम्किने छ यो सोचमा म सहमत छैन । जनकपुरधाम आउने व्यक्तिहरु पूजापाठका लागि आउने गर्छन । परिक्रमा सडक बाहिर पनि निक्कै होटेलहरु खुलेको छ तिनीहरुको व्यवसाय हेर्नुस कति चम्किएको छ । केही सीमित होटेल व्यवसायीका लागि जनकपुरधामलाई बरबाद नगर्नुस ।
आफ्नो हित मात्रै सोच्नेहरु संग जनकपुरधामको विकाससंग मतलब नै छैन । होटेलमा मांशाहारीका साथै शाकाहारीहरु पनि खान जान्छन् तर एउटै फ्रिजमा रक्सी पनि रहेको हुन्छ र कोल्ड ड्रिंक्स पनि । एउटै किचेनमा दूबै एउटै कुकले बनाउँछ । यो न्यायसंगत भएन ।
प्र. व्यवसायीहरु यो अभियानलाई लिएर के भन्छन् ?
व्यवसायीहरु बिच मतभिन्नता रहेको छ । जनकपुरधामको विकास सोच्ने होटेल व्यवसायीहरु परिक्रमा सडक भित्र मद्यमांशका बिरोधी छन् तिनीहरु शाकाहारी होटेल बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छन् । तर आफ्नो हित मात्रै सोच्नेहरु संग जनकपुरधामको विकाससंग मतलब नै छैन । होटेलमा मांशाहारीका साथै शाकाहारीहरु पनि खान जान्छन् तर एउटै फ्रिजमा रक्सी पनि रहेको हुन्छ र कोल्ड ड्रिंक्स पनि । एउटै किचेनमा दूबै एउटै कुकले बनाउँछ । यो न्यायसंगत भएन ।
प्र. सरकारी निकाय त तपाईहरुको मुद्दाप्रति उदासिन नै देखिएका छन नि ?
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले चाह्यो भने चाँडै समस्या समाधान हुन सक्छ । त्यसको नियतमा खोँट छ तर हामीसंग कुरा गर्दा बखत प्रमुख, उपप्रमुखले परिक्रमा सडक भित्र मद्यमांश नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा गर्छन । सर्वोच्चले समेत भनि सकेको छ परिक्रमा सडक भित्र मद्यमांश नियन्त्रण हुनु पर्छ । विभिन्न ताम्रपत्रहरुमा पनि परिक्रमा सडक भित्र मद्यमांश बिक्री नहुने कुरो लेखिएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कुनै ईजाजत दिँदा परिक्रमा सडक भित्र मद्यमांश बिक्री वितरण गर्न पाउने कुनै कुरो लेख्दैन । राजश्व समेत उठ्दैन । यस्तो अवस्थामा सबै पक्षले परिक्रमा सडक भित्र मद्यमांश नियन्त्रणका लागि पहल गर्नु पर्छ ।
प्र. नगरपालिकाका अधिकारीहरुका उदासिनताको बाबजुद मद्यमांश नियन्त्रण हुन्छ जस्तो तपाई लाई लाग्छ ?
अवश्य । उहाँहरु पनि साकारात्मक बन्नु हुन्छ । जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउनु पर्छ । हामी यसका लागि बन्द हडताल गर्दैनौँ साधु सन्तहरुलाई अगाडी राखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलाउँछौँ । मलाई विश्वास छ नाकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरुलाई पनि परिवर्तन गराउँछौँ ।
Tags जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका मुरलीमनोहर मिश्र
Previous नेपाल भारत सीमापर कोनो हालतमे तार जाली नहि लागतः राजीव झा, महासचिव राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
Next मैथिली बालकथाः तितलीसंग दोस लगाएब